当前位置:主页 > TAG标签 > zimbabwean
VOA标准英语10月-Zimbabwean Opposition Says Power-Sharing Deal und
Zimbabwe's opposition Movement for Democratic Change says the publication of ministerial posts in an official government newspaper threatens the country's power sharing agreement. Tendai Maphosa has more from Harare. President Robert Mugabe, left, s...
VOA标准英语10月-Zimbabwean Economic Crisis Testing Education Syst
Education used to be a top priority for Zimbabwe's government. But as Tendai Maphosa reports from Harare, the country's economic and political crisis is taking a heavy toll on the education system. Under normal circumstances, junior school children...
VOA常速英语2008年-Zimbabwean Opposition Leader, Former Mine Worke
By Chris Simkins Washington 21 April 2008 Morgan Tsvangirai is the head of Zimbabwe's opposition party and over the last decade has made unsuccessful attempts to unseat the country's longtime president Robert Mugabe. Now in 2008, the 55-year old Tsva...
VOA常速英语2008年-For Zimbabweans, No Cause to Celebrate Independ
By Tendai Maphosa London 18 April 2008 Zimbabwe's economy is a shambles. Not long ago, Zimbabweans learned that their country's inflation rate, already the highest in the world, hit a new high of 165,000 percent. A Zimbabwean woman who gave her name...
VOA常速英语2008年-Zimbabweans Hold Mock Elections in London
By Tendai Maphosa London 29 March 2008 Zimbabwean law does not allow citizens outside the country to vote. But to show their solidarity with Zimbabweans who are voting in Saturday's elections, some of those in the diaspora have organized mock balloti...
VOA常速英语2007年-Britain: Failed Zimbabwean Asylum Seekers Will
By Tendai Maphosa London 05 December 2007 The British Home Office says the ruling against a Zimbabwean asylum seeker does not mean automatic removal of people who failed to gain asylum in the United Kingdom. Tendai Maphosa reports for VOA from London...
2007年VOA标准英语-Zimbabwean Activists Seek UN Investigation of G
By Lisa Schlein Geneva 20 September 2007 Human Rights Activists from Zimbabwe are seeking support from Latin American countries to raise awareness of the human rights situation in Zimbabwe. They are also urging the United Nations Human Rights Council...
路透社 Three-Year 导弹防御系统 爆破手 cataplexy hog arthur 朵拉系列游戏 labor 联合国秘书长 与你对话 Certifica 中国航空公司 Growi 四季歌 出国考试 Admission 遗迹 Boomin smile 征求表达意见 Larg Caucuses 牛津大 格式 失物招领 intervene 待售的 买房子优缺点 Ripple 最猛烈降雪 World Cup dates 艾萨肠胃护理 承认吧 三部曲神剪辑 交际舞 doctor Contrariwise 男的怎么分手 fit transformers Freedo 中国2013 一目十行 泡妞 惊险电 险被 Lawmakers 戒指 初一英语97 Starb Frenc flattery 第二十三讲 多余食物打包 Vi Skyscraper 经济学家 kip